Horudhac: Chelsea iyo Liverpool… (Xog walba oo aad uga baahantahay ciyaarta Final-ka FA Cup) – Gool FM
Horudhac: Chelsea iyo Liverpool… (Xog walba oo aad uga baahantahay ciyaarta Final-ka FA Cup)
Dajiye May 14, 2022
(London) 14 Maajo 2022. Kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa mid kastoo ka mid ah waxay dooneysaa inay ku guuleysto koobka FA Cup-ka, oo ay caawa kulanka finalka ku wada ciyaari doonaan garoonka Wembley.
Liverpool ayaa u soo baxday finalka FA Cup-ka kaddib markii ay 3-2 kaga badisay Manchester City, halka Chelsea ay finalka u soo baxday kaddib markii ay 2-0 ku garaacday Crystal Palace.
Chelsea ayaa rajaynaysa in ay guul ka gaarto Liverpool oo ay xili ciyaareedkeeda ku badbaadsato hanashada koobka FA Cup, halka Reds ay doonayso in ay ku guulaysato koobkeedii labaad ee xili ciyaareedkan kddib Carabao Cup.
Tartanka: Final FA Cup
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:45 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Tababare Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay in kulanka caawa ee Finalka FA Cup uu ka maqnaan doono xiddiga reer Brazil ee Fabinho, balse taas badelkeeda macalinka reer Germany ayaa kulanka caawa u heli doono dhammaan adeegyada xiddigaha kooxdiisa.
Dhanka kooxda Chelsea uu hoggaamiyo Tababare Thomas Tuchel ayaan heli doonin kulanka caawa adeegyada xiddigaheeda kala ah Hudson-Odoi iyo Ben Chilwell, balse warka ugu wanaagsan ee Blues ayaa noqonaya inay ciyaari karaan labada xiddig khadka dhexe ee N’Golo Kante iyo Mateo Kovacic oo dhaawacyo kala duwan kaga maqnaa safka kooxda.
Taariikh ahaan, Liverpool waxay ku wajahday kooxda Chelsea, tartanka FA Cup-ka, kahor kulanka caawa 10 jeer, Reds ayaa badisay afar jeer, waxaana laga badiyay lix kulan.
Liverpool ayaa 16 gool ka dhalisay Chelsea, halka kooxda reer London ay 21 gool ka dhalisay Reds, Bobby Tambling oo ah halyeey Blues ayaa ah gooldhaliyaha taariikhiga ah ee labada kooxood ku kulmeen koobkan, isagoo dhaliyay saddex gool.
Chelsea: Edouard Mendy (GK), Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Ruediger, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso, Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku.
Liverpool: Alisson Becker (GK), Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Naby Keita, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Mohamed Salah, Sadio Mane, Luis Diaz.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlay imaatinka Erik ten Hag ee kooxda Manchester United